Macallin Dugsi Quraan oo aano qabiil loo dilay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Macallin Dugsi Quraan oo aano qabiil loo dilay!
Macallin Dugsi Quraan oo aano qabiil loo dilay!
Mid ka mid ah Dugsiyada Quraanka Kariimka lagu barto /Sawir hore.
Wanlaweyn (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha hoose ayaa sheegaya in Degmada Wanlaweyn lagu dilay Macalin Dugsi Qur,aan.
Kooxo hubaysan ayaa fulisay weerarkaan lagu dilay Macalinka Dugsiga Qur,aanka, waxa ay sidoo kale dhaawac u gaysteen ruux ka mid ah dadka deegaanka.
Dilka iyo dhaawaca loo geystay dadkaan ayaa yimid, kadib markii rag ku hubeysan qoryaha AK47 ay weerar kusoo qaadeen degmada Walanweyn, isla markaana ay dileen Macalin Dugsi Qur’aan oo lagu Magacaabi jiray Cusmaan Cirbad qof kale oo Shacab ahna ay dhaawaceen.
Arrintaan ayaa salka ku haysa aanooyin Qabiil oo horay deegaanka uga dhacay, kuwaasi oo illaa hadda raadkooda uu taagan yahay.
Maamulka Degmada Wanwaleyn ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin falalka dilka ah ee ku saleysan aanooyinka Qabiilka ee Degmadaasi ka dhaca.
Waxay aheyd maalin ka hor markii kooxo hubaysan ay Degmada Wanlaweyn ka dhaceen gaari, iyadoona soo celinta gaarigaasi ku guuleystay Ciidamada ammaanka degmadaasi.
Macallin Dugsi Quraan oo aano qabiil dartiis loo dilay